RA'YI	Uncategorized	 December 21, 2018 1 Minute
WOLLEGA AYUU DAGAAL KASOCDAA
Wuxuu hada dagaal xoogani kasocdaa bariga gobolka Wollega ee deegaanka oromada. Dagaalkan ayaa dhexmaraya ciidamada militaryga Ethiopia iyo ciidamada hubaysan ee jamhada oromada ee loo yaqaano OLF (ONAG).
Mana aha markii 1aad ee uu dagaalkani dhex maro labadan ciidan ee dhawr jeer oo hore ayay isla gobolkaas dagaalo cul culus iskaga hor yimaadeen iyadoo labada dhinacba uu kasoo khasaare laxaad leh oo dhimasho iyo dhaawacba leh.
Waxaana lasaadaalinayaa inay jamhada Onag oo aad udhaga adag in kabadan 20 sanana dagaal duurka ah kujirtay ay markan talada dalka inay hantaan mooyee aysan wax kale ucuntamaynin maadaama ay taageero aan tiradooda lakoobi karin kahaystaan shacabka deegaanka oromada islamarkaana aysan aaminsanayn nidaamka kiristanku uu majorityga dalka yahay oo ay iyagu Islaam yihiin xuquuqda in islaamku uu majority kanoqdo wadankana ay qori afkii kuraadinayaan.
Iskusoo wada duuboo, jamhadan islaamka ah kasokow taageerada shacabka oromada waxay garab adag iyo gargaarba ay kahaystaan dunida islaamka ah iyo waliba ururka tplf ee dhawaantan talada wadanka laga fara maroojiyay.
Previous Post Ururka TPLF Oo Qaadacay Ansixinta Komishinka Xuduudaha
Next Post Iskalaaji